भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार नाघ्यो, नेपाल पनि उच्च जोखिममा ! – Sagarmatha Online News Portal
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार नाघ्यो, नेपाल पनि उच्च जोखिममा !
काठमाडौं । विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट भारतमा संक्रमित हुनेको संख्या ९ हजार नाघेको छ ।
वर्ल्डओमिटर्स इन्फोले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म भारतमा यो भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ९ हजार २ सय ४० पुगेको छ । भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या १ हजार ९६ जना पुगेको छ ।
वर्ल्डओमिटर्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोना भाइरसबाट ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । भने ७ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
भारतको महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढि प्रभावित बनेको छ । अहिलेसम्म महाराष्ट्रमा १ हजार ९ सय ८५ जना मानिसमा संक्रमण देखिएको छ, भने १ सय ४९ जनाको यो भाइरसको कारण मृत्यु भएको छ । त्यस्तै दिल्ली र तामिलनाडुमा पनि संक्रमितको संख्या १ हजार नाघेको छ ।
अहिलेसम्म भारतमा १ हजार ९६ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । अझै ७ हजार ८ सय १३ जना उपचाररत छन् । हालसम्म भारतमा कोरोना आशंक गरिएका १८ लाख ९ हजार १ सय ११ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ ।
यसैबीच भारतमा दिनप्रतिदिन बैढ्दै गइरहेको कोरोना संक्रमितका कारण छिमेकी देश नेपाल पनि उच्च जोखिममा परेको छ । झनै नेपाल र भारतको खुला सीमानाका कारण नेपाल थप जोखिममा परेको स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् ।
हिजो (आइतबार) मात्रै भारतबाट विरगंञ्ज आएका ३ भारतीयलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालको तराईका जिल्लामा थप जोखिममा बढेको छ । ती भारतीय नागरिकले प्रयोग गरेका बाटो लगायतका सबै नागरिकको पहिचान गर्न सकिएन भने यसले थप संक्रमित बढ्ने स्वास्थ्य विदहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।